Sidee Loo Noqdaa Ganacsade guuleysta? | vfxAlert official blog
Sidee loo noqdaa ganacsade wanaagsan?
Muuqaalka caanka ah, ee ku saleysan qof walba oo ku soo galaya ganacsiga malaayiin kaliya, waa mid waqti hore laga soo dhaafay. Haddii aan ka reebno aragtida dadka khasaaray ee daba dheeraaday, ka dib maalgashadayaasha guuleysta iyo ganacsatada, iyagoo ka fikiraya sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , waxay dejiyeen hadafyo gebi ahaanba ka duwan naftooda.
Kuwa isdabajooga ah, laakiin aan diyaar u ahayn shaqo culus, "waqti badan" iyo lacag badan ku bixiya suuqa si ay u caddeeyaan naftooda (iyo guud ahaan - kuwa kale!) Taasi waa Iyagu! Way awoodaan! Kasbasho maalin kasta! Kadibna, sida caadiga ah, way ka tagayaan suuqa weligood.
Ganacsatada xasilloonida ayaa iskood isu dejiya, laakiin ujeeddooyin macquul ah (daaweyn, waxbarasho, iibsasho khasab ah, degganaansho dhaqaale), ka dib markay gaaraan waxay doorbidayaan inaysan mar dambe halista gelin. Ciyaartoyda noocan oo kale ah waxay ka tagaan ganacsiga dhabta ah si ay u maalgashadaan, badiyaa xoogaa yar oo hanti muddo-dheer ah.
Ganacsatadani waxay doorbidaan inay hayaan macaash deggan, si joogto ah ayey u horumariyaan; ka ganacsadaan danta iyo raaxada darteed, iyaga kaliya ayaa leh fursadaha ugu badan ee ay ku noqon karaan milyaneer .
Wax kastoo ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah oo aad u doorato naftaada - ha ka filanin tanaasul ka timaadda suuqa. Kahor intaadan noqon ganacsade wanaagsan, qof kastaa waa inuu maraa dhowr talaabo oo lagama maarmaan ah.
Maqaalka waxaa lagula talinayaa akhriska:
mid aad u xiiso badan oo ku saabsan waxa ikhtiyaar ikhtiyaari ah uu yahay;
Bilowga aan lahayn khibrad ganacsi;
Bilowga leh khibraddii ugu horreysay ee taban ee akoon dhab ah;
Kuwii horeyba u helayey faa'iido deggan, laakiin fahamsan inay weli wax u dhiman yihiin.
Aynu ku bilowno rabitaan caadi ah:
Waxaan hayaa 100 dollar, laakiin waxaan doonayaa milyan!
Fahamka ay tahay inaad ka shaqeyso suuqa uma imanayo kuwa bilowga ah isla markiiba. Xayeysiisyada dillaalku waxay u muuqdaan kuwo fudud: soo deji barta ganacsiga (bilaash!), Dhig deebaajigaaga (sinaba), eeg meesha kaliya ee ay ku yaalliin laba badhan oo CALL / PUT - Milyanka la kasbaday ayaa durba soo ifbaxay.
Si kastaba ha noqotee, wadada loo maro fahamka sida loo noqdo ganacsade wanaagsan, laba xaaladood oo waaweyn ayaa suurtagal ah:
Suuqa ayaa isla markiiba ka soo horjeedda ganacsadaha, ganacsiyada neerfaha ee soo noqnoqda oo kaliya ayaa keena khasaare, deebaajiga hore ayaa si dhakhso leh u lumay, bilowgu kama adkaan karo walaaca daran (inta badan - dhibaatooyinka dhaqaale ee dheeriga ah), sidaas darteedna ma soo laabanayo. Tani waa xalka ugu nabadgelyada badan kuwa aan ku habboonayn ganacsiga;
Xirfadaha ugu horeeya waxay keeneen faa iido yar - waxa loogu yeero «ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo loogu talagay newbie's hit». Ganacsade aan waxba ka aqoon maamulka lacagta ayaa bilaabaya inuu kordhiyo mugga iyo soo noqnoqodka xulashooyinka. Lacagta ka soo baxda deebaajiga "way baxaan" xitaa ka dhakhso badan kiiska koowaad.
In kasta oo xulashada adag ay jirto, boqolkiiba inta ka badbaaday marxaladan kadib aad ayey u sarreeyaan - ku dhowaad 50%. Haddii khasaaraha ugu horreeya iyo culeyska fekerku uusan jabin bilowga, wuxuu fahmi doonaa tallaabada xigta .
Waxaan sii wadeynaa ganacsiga ...
Khasaaradihii ugu horreeyay kadib, waxaan bilaabaynaa inaan si firfircoon "u rarno maskaxda": macluumaadka waxaa lagu wada baabba'aa qaybo aad u ballaaran qaab kasta, iyo sidoo kale buugaag, maqaallo, fiidiyowyo, shirar iyo falanqeyn aan dhammaad lahayn, gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'. Waxaa jira koorsooyin tababar oo lacag leh, iyo sidoo kale tababaro kala duwan, websaydhyo, talooyin iyo la taliyayaal.
Caqliga " sida ugu dhaqsaha badan uguna qaalisan kan ugu fiican " ayaa qasbaya wax kasta oo la arko / la maqlo / la akhriyo / lagula taliyo (iyadoon laga hubin ilo kale), isla markiiba lagu dabaqo ganacsiga - way fiicantahay haddii koontada demo, si fiican, ama ugu yaraan 1 xulasho. Badanaa, cusbooneysi cusub oo xad dhaaf ah oo macluumaad badan ayaa isku dayaya inuu ku ganacsado hal mar iyo dhammaan deebaajiga.
80% kiisaska, "tababar" noocan oo kale ah ka dib waxay sii joogayaan lacag la'aan, laakiin hadda jawaabaha su'aalaha weligood ah " Yaa eedda leh " iyo " Maxaa la sameeyaa? "
Had iyo jeer waa khaladka la taliye xun / dillaal / istiraatiijiyad / calaamado binary bilaash ah / lacag la'aan (hoosta ka xariiq waxyaabaha lagama maarmaanka ah!), Mana ahan ganacsade. Caadi ahaan mudadaas oo kale waxay socotaa 3-4 bilood, laakiin qaar ayaa laga yaabaa inay "ku laalaadaan" muddo dhawr sano ah.
Sii wad barashada, laakiin adiga. Hubi macluumaad kasta kahor intaadan isticmaalin, iyo sidoo kale khibradaha ganacsi ee kuwa kale. Waan dhageysaneynaa qof walba, laakiin ma nuquleyno cidna, waxaan iska hubineynaa dhammaan fikradaha koontada demo. Waxaan aaminsanahay kaliya istiraatiijiyadeena ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah.
Waxaan ku ganacsan sida uu xeeladda, iyo khasaaraha ka sii !?
Kuwii ka badbaaday labadii marxaladood ee ugu horreeyay waxay ugu dambayn fahmeen baahida loo qabo nidaam maarayn lacageed.
Walwalku wali ma uusan dhaafin, cabsida heshiisku wali way muuqataa, shucuurta wali way cadaadinaysaa iyadoo la filayo natiijada, laakiin waxaa jira horeyba fahamka halista oo ah qodob suuq ah oo lama huraan ah.
Sababtoo ah cidina wali ma ogaan sida loo noqdo ganacsade wanaagsan iyadoo aan loo maamulin lacagta saxda ah.
Dhibaatooyinka bilowgu maaha kaliya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah iyada oo aan xisaabin dhicitaanka saxda ah, laakiin rabitaanka dakhliga degdegga ah ee hantida ganacsiga oo leh isbeddel sarreeya ama aan degganeyn. Ama iyada oo aan la tixgelin macaashka ku saabsan macaamil ganacsi iyo guddiyada kale ee dilaaliinta ah. Adigoon hubin habka maaraynta halista koontada demo, kuma ganacsanno lacagta dhabta ah!
Saddexdaan marxaladood waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo farsamo, haddii xamaasaddu aysan dhammaan, markaa ganacsatadu waxay xaq sharci ah ugu leeyihiin inay isu hambalyeeyaan - waxaad u timid faham buuxa oo ku saabsan sida loo sameeyo dakhli deggan.
Waxaa jira deebaaji, istiraatiijiyad, iyo nidaam maamul lacag. Hadda waxaad u baahan tahay inaad fahamto…
Suuqa lama saadaalin karo;
Dhaqdhaqaaqa sicir bararku wuxuu kuxiranyahay cilmi nafsiga badan ee ganacsatada iyo mala awaalka kuwa sameeya suuqa marka loo eego sharciyada dhaqaalaha;
Ganacsi si fudud waa taxane ah oo ku-guuleysi iyo ganacsi lumis. Ma beddeli doonto nidaamka adduunka.
Sidee looga shaqeeyaa xaalad sidan oo kale ah oo hubaal la'aan ah?
Waa inaad barataa falcelintaada shakhsi ahaaneed ee suuqa, iska jooji wax kasta oo carqaladeeya shaqada adag, oo naftaada u tabobar inaad furto ganacsi kaliya calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah, oo aanad ku hoos jirin saamaynta shucuurta ama arrimo dibadeed.
Doorbida xasilloonida faa'iidada degdegga ah. Samee hadafyo macquul ah oo isdaba-joog ah, adoo ka fikiraya kaliya lacag laakiin sidoo kale dareenka guusha oo ah natiijo togan.
Waxaan ku mashquulsan nahay tababar nafsaani ah, laakiin ma jirto wax faa'iido ah. Dhammaan buun buuninta !!
Ku dhiirrigelinta xayeysiinta iyo hunguriga, qofka ku cusub suuqa wuxuu la mid yahay bisad gaajeysan oo jiir kasta daba socota. Laba daraf ayaa suurtagal ah: ama falanqaynta suuqyadu waxay qaadataa waqti aad u dheer sababaha faaiidada soo galitaankana waa la seegay, ama waxaa jira ganacsiyo firiiric badan.
Bisad khibrad leh ma daba ordo jiirarka oo dhan, laakiin waxay qabataa mid uu isagu doortay. Ganacsatadu waxay leeyihiin waxyaabo badan oo ay bartaan!
Waxaa imanaya daqiiqad marka daalku sheegayo in suuqa uu u dhaqmayo "si sax ah", sicirka ayaa hubaal u aadi doona halka ganacsaduhu u baahan yahay! Sidaa awgeed, ganacsigu wuxuu u muuqdaa mug weyn oo aan qiil lahayn, furitaan badan oo fursado cusub oo ku saabsan calaamadaha binary ee bilaashka ah, ama rajada laga qabo dib u noqoshada khasaarooyinka halista ah. Damaca iyo hamiga ayaa shaxanka wax aan jirin ku daraya.
Haddaba waa maxay dhibaatadu?
Khasaarahaaga iyo burburka neerfaha kama hor istaagayo suuqa inuu u dhaqaaqo jihada ay ciyaartoy waaweyn u baahan yihiin. Dabcan, illaa aad tihiin suuq abuur oo aad "ku samaysaan" suuqan malaayiin mug ah.
Kuwa yaqaan sida loo noqdo ganacsade wanaagsan waxay ka ganacsadaan oo keliya calaamadaha ugu macquulsan. Calaamad maleh - soo galid malahan. Xitaa haddii aad runtii rabto lacag.
Ha aaminin xayeysiinta: kuwa ka ganacsan doona mabda'a - waxay eegeen suuqa, waxay fureen ganacsi, waxay qaateen macaash, waxay aadeen maqaayad - suuqa marka hore "wuu cunaa".
Waqtiga lagu qaatay suuqa waxay kuxirantahay hadafka: u diyaargarow inaad ugu yaraan 4-5 saacadood maalintii u isticmaasho suuqa, sida xirfadle kasta.
Ikhtiyaar waa natiijada shaqada; waqtiga intiisa badan waxaa lagu bixin doonaa falanqaynta macluumaadka iyo ganacsiga calaamadaha binary. Markaad khibrad ka kasbato, waxtarka waqtigaaga shaqada wuu kordhayaa, tartiib tartiib ahna waqtiga goobta ganacsiga waa la gaabin karaa.
Markay u muuqato (iyadoon loo eegin marxaladda ay tahay!) Fikrad ganacsi oo umuuqata mid xiiso leh, ama, tusaale ahaan, waxaa jira shaki ku saabsan falalka hadda socda, sifiican ugu badbaadi warqadda.
Isku day inaad isla markiiba sameyso wax si aad u hirgeliso (ama u tijaabiso), haddii kale fikraddu waxay noqoneysaa mid aan khusaynin (suuqa wuu isbeddelayaa), ama waxaa jiri doona natiijo taban, ama waad ilaawi doontaa, ama caajis baad lahaan doontaa inaad wax qabato oo ku yaal meheradda ganacsiga binary.
Soo koobo ...
Kaliya kama fikiri kartid faa'iidada ganacsiga. Ku noolow nolol ku qanacsan: qoyska, asxaabta, hiwaayadaha, jimicsiga. Haddii kale, xitaa khasaaro yar, oo aan kugu filnayn (heerarka himilooyinkaaga) faa'iido, iyo sidoo kale wixii kale oo xun, tusaale ahaan, dhaleeceynta asxaabta ama qaraabada, waxay sababi doontaa hoos u dhac ku yimaada is-qadarin, daal iyo diiqad.
Waqti ka go 'maskaxdaada ka saar suuqa - ka dib "soo noqoshada" waxaad layaabi doontaa inta fursadood ee faa'iido u jirtaa.
Waxa ugu muhiimsan waa in meesha laga saaro "fikradaha maskaxda" ee khaldan sida ay calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah: isku kalsooni sare, khiyaaliga aan macquul ahayn, talo ka timaadda dadka kale, fikradaha xun, caajiska, hunguriga, is-tudhinta Kaliya waxaad tahay khibrad ganacsi iyo dabeecad adag. Haddii aad rabto guul (oo aan kaliya lacag ahayn!) - ha quusan, ka fikir kaliya mustaqbalka iyo faa'iidada ayaa iman doonta!